Kenya “Somaliland waxaan ula dhaqmaynaa qeyb kamid ah Federaalka Soomaaliya” – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
January 22, 2022 Xuseen 73
Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya Raychelle Omamo ayaa sheegtay in Kenya ay Somaliland ula dhaqmeyso sida qeyb ka tirsan federaalka Soomaaliya, iyadoo sheegtay in Somaliland aysan Kenya u soo gudbin codsi loogu aqoonsanayo dowlad madax bannaan.
Warkan ka soo baxay Wasiirka arrimaha dibbada Kenya ayaa imanaya kadib markii dhawaaan Baarlamaanka dalka Ingriiska dood dheer ka yeeshay arrinta aqoonsiga Somaliland.
Bishii December ee sanadkii 2020 ayay ahayd markii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi uu booqasho rasmi ah ku tegay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya.
Ani waxaan qabaa in Shacabka ISAAQA ama SOOMAALILAND la aqoonsado. Hadii dawladda SOOMAALIYA ay waxba qabsan weeyday, maxaa loo haaystaa shacabka IIDOOR.
Waxaan codsanayaa in loo ogolaado in ay go’aan. Laakeen, hal shardi baa noogu xidhan. Dadweynaha HARTI, waa in aysan la go’in ISAAQ. HARTI DAAROOD walalahooda kale ay wax la qabaan.
Hase yeeshee, hadii IDOOR ku waasho HARTI DAAROOD, wax kasta waa ku weynayaan. Waxeena arrinto noqonaysaa ila meerayso.
Danta HARTI DAAROOD waxeey ku jirta walaalahooda kale ee HARTI DAAROOD iyo SOOMALI WEYN.
Yaa iiga jawaabi kara, HARTI DAAROOD danta ugu jirta qabiil yadh oo xanaaqay, maxeey ka heliyaan… Halka oo wax ka weynayaa HARTI KALE ee walaalahooda ah iyo SOOMAALI WEYN oo dhan??
Markaad aragto caqliga IIDOOOR, waad ka yaabaysaa… soo teey shalay lahaayeen, DAAOORA WEYN, DAAROOD DALKA IIGA GUUR… Maxeey hadda HARTI DAAROOD u daba-roorayaan.
IIDOOROOOW, hadii aad ictiraaf rabtaan, dhulkeena goosta, qofna idin dabo-urdimaayee..
Harti, waa ciyaalka iidoorka, waxay ka mid yihiin shicibka degan Somaliland.
Ninyahow siyaasadu ma aha mid ay wax kaaga baxsan yihiin ee waxaan kugula talinayaa inaad waxbarashadaada ku sii dadaasho inaad wiil yar tahay ayaan qiyaasayaa marka aan u fiirsaday qoraaladaada.
Kadib marka aad fahanto sida uu caalamku u shaqeeyo ayaad fahmi kartaa sababta.
Adduunku kuma shaqeeyo qabyaalad, waxa lagu shaqeeya Sharci iyo xeerar caalami ah, Juquraafi, taariikh, Siyaasad iwm.
Waxa jira qabiilooyin wada dhashay oo hadana xuduud caalami ah ay kala qaybiso sida Masaayga oo Kenya iyo Tanzania xuduudoodu kala qaybiso, Canfarta oo saddexda wadan ee Djabouti, Itoobiya iyo Eritrea xuduudahoodu kala qaybsheen,
Tuutsiga iyo Huutiga oo Ruwanda iyo Brundi kala degan iwm.
Dhamaan qabiilooyinkaas waxa ay juquraafiyada ilaahay ku beeray ku kalifeysaa in ay wax la qaybsadaan dadka ay isku deegaanka yihiin.
Similarly, Harti Waqooyi wuxuu hore uga tirsanaa Somaliland xorriyadii iyo ka horba.
Xuduud caalami ah ayaa kala qaybisay iyaga iyo walaalahoodii kale ee Ogaden, Somalia iyo Kenyaba deganaa.
Hadii Daarood ha la isku keeno la yidhaahdo waxay ka dhigantahay iyadoo la yidhaahdo qabiilooyinkaa aan kor ku xusay ee Afrikaanka ah ha la isku keeno… ma aha wax sharciyada caalamka ee xuduuduhu aqoonsatahay.
Ma u malaynaysaa in Isaaqa Itoobiya degini odhan karo anagu dhulkayaga Somaliland baanu ku darsanaynaa waayo halkaas baa dadkaygu degaa? Jawaabtu waa maya.
Hadii aynu u nimaadno dooda ah in Isaaqu Hartiga ku khasbayo kala go’a sidaas awgeedna ay waajib tahahay in Hartiga laga badbaadiyo damaca Isaaq, Arrintani waa been waayo:
* 1991 markii la sameynayey Somaliland waxay saxeexeen dib ula soo noqoshadii xorriyadii luntay. Hadaad beentay moodayso soo dhageyso Cali Khaliif oo sheegaya inay qayb ka ahaayeen.
Dhamaantood way saxeexeen marka laga reebo garaad xanuunsanayey.
* Hartigu wuxuu ka mid yahay qabiilooyinka wada leh Somaliland, keligiina marabo midnimo’e waxa jira dad la mid ah oo k soo jeeda qabiilooyinka kale, iyo qaar raba kala go’a. Tusaale, waad aragtay ragga Muqdisho jooga ee Isaaqa ah ee midnimada raba iyo kuwa Hartiga ah ee Tukaraq u jooga difaacida qaranimad Somaliland.
Ma jirro qabiil gooni ah oo midnimo ama kala go raba, waxa jira dadyow kala duwan oo labada dhinac ku kala faylsan.
Waxa lagu kala baxaa waa halka ay rabto aqlabiyadu.
Aqlabiyadu- oo aan qabiil gooni ah ahayn- waxay rabtaa gooni goosad.
Majority rules minority.
Hadii kuwa midnimada doonaya laga adkaado nasiibkoodaa ciilay, they have to swallow the bitter pill. Kiniinka qadhaadh hà liqeen sidii Scotland.
Waji qabax ileen doqoni uma dhimato.
Waa markii 4-raad asbuuc gudihiis. Mareykan, ingiris, ethiopia iyo hadoo ah kenya.
Nimakii yahuda ahaa ayaa dalow ka tuuray oo ku yiri aflagaadeeya rush iyo china si mareykan iyo ingiriis inii soo dhaweystaan.
Snm ma rabto in ay go’do. Waayo hadii ay rabto oo run ka tahay go’itaanku waxay sheegan lahayd dagaankeeda iyo sadexda magaalo ee ay ka tirsantahay. No Awdal, No sool, No Sanaag
Wey ogyihiin hadii ay sheegtaan sadexdaas magaalo in somali oo dhan dhahayso waidinkaase sii hayaama oo sii qulqula oo saxiixa ayaaba loogu taagi lahaa si degdeg ah.
Umeyba baahna’ba in ay yuhuud kireystaan ama hadba albaab qalaad qaraacan oo lacgtii caruurta caanaha loogu gadilahaa khaasaariyaan..
Sidii aan awalba iri Cidaanu ma rabaan in ay go’aan ee anakey na wareerinayaan.
Dood boqol jeer oo hore la jabiyey maan jeclayn inaan ku noqdo laakiin Sanaag iyo Sool saw Isaaq ma dego? Muxuu u sheegan waayey?
Saw weligoodba Somaliland may ahayn?
Mida kale,Adigiibaa waxaad marna ku doodaysaa inaanu Hartigu rabin inuu ka mid ahaado Somaliland hadana waxaad ku leedahay nimanka dhulka Puntland ka qabsaday waa Hartiyoo sidaas awgeed baan u dhawrayaa ee berri hore ayaan Sool qabsan lahaa.
Hartigu hadaanu Somaliland ahayn muxuu ugu dhimanayaa difaaciisa? Muxuu se Isaaqa ugu jabhadayn waayey waa kuwaa sixniga wax kuwada cunayee ee adigoo walaalkii ah uu ka doorbiday inuu kula dagaalamo, ninkii Isaaq iyo Samaroona walaaleysto.
Adigu Hartiga naf uma haysid ninyahow, iyagii magangalyada ku biday ayaabad dhulkoodii ku haysataaye!
Hartinimada waad ku awr-kacsataa oo waxaad ogtahay in Waqooyigana Isaaq u badan yahay, koonfurna Hawiye Imaam u yahay, dooni maysid inaad asal- madoorshaha ilaahay kaa dhigay aad noqotid. Sidaas awgeedna, waxaad isku daydaa in reer Somaliland aanay dhinac isku raacin si aan labada dhinacba lagaaga muquunin!
Hadii hartinimo jiri lahayd, ehelkaa baa kaama yaacaan ee way ku fahmeen inaad ku awr-kacsato bahasha
Garoowe baa aqoonsan haday yimaadaan
Soomaalida waqooyi 1960kii bay iyagoo wada socda u yimaadeen Soomaali Koofureed oo aay wada dhisteen dowladdii ugu horreeysey ee aay Soomaaliyeed yeelato taariikhda inta la ogyahay!
Marka, haddii aay Soomaali waqooyi haddana dooneeyso in aay go’do, Soomaali Koofureed ha u timaado iyadoo wada socota oo go’itaan wada rabto, waxba yaaysan 4 qof oo Iidoor ahi meelaha Durbaan maran garaacine:::
Dunidanna xaqiiqdaa ayaay arkeeysaa ooy ogtahay, dhegna u raarin meeyso doodda hal qoys oo xiiqsan, weligiiba lafo dad uu laayey ha soo faage’e! Kkkk
Waxaa la qaadayaa referendum lag qaadayo dadka Somaliland. Meeshii loo bato baa la maraya. Sida South Sudan, Ereteria, Scotland, Quebec
Bog horena hadda ayaan ku arkay isla hawraartan jilicsan ee qolalka qiiqu hareeyay ee fadhi-ku-dirirka la isku tuurtuuro. Runtiina, sikasta oo aad tacbiirta Ustaad Arar iyo aniga nagaga dayato, hadalkaagu nuxur iyo nah maleh oo waa mid duugoobay oo daxaleystay ee uu casrigiisiina waahore idlaaday.
Siyaasaddu iyo noloshuba marba marxalad ayay taaganyihiin oo taariikhda siyaasadeed ee Soomaalidana sixun baad uga arradantahay, waayo haddii kale waxan kaasoo burqada waad kaxishoon lahayd oo waaqiciga dhabata ah ayaad doodda kusaleysiin lahayd. Aniga oo aanan kusii dheeraan ayaa waxaan kugu baraarujinayaa in ay micigammaarrada Isaaq Majeerteenka uga mahadiyaan in ay siyaasadda caalamiga ku ilbixiyeen oo lana jaanqaadsiiyeen.
Isaaqa oo iska dhegala’ ayay Majeerteenku baraarujiyeen oo habka dawlad loo mucaarado bareen. Majeerteenka ayaa jabhadnimada farsamooyinkeeda baray oo wax la toosiyay, SNM-na ka umuliyay oo lacanqariyay. Qaladka istraatijiga ee ugu xumaa ee ay SNM kudhacday oo qummaati iskugu boqonna-goysayna wuxuu ahaa in ay Majeerteen kadhega’adaygtay oo markii dambena toos ucolaadisay. 30kaa sanadood – Eebbe Sokadii – Majeerteenka weeye quwadda sha’niga iyo shimbirka SNM kala dhantaashay oo rajadeedii ceel dheer kaga ridday, siyaasadda Soomaaliyana iskugu shaandheysay qaab suurtagalnimada Somaliland mustaxiil kayeelay.
Haata iyo dan, marxaladdii dagaalkii qaboobaa ee Puntland iyo Somaliland kadhexeeyay waa lagasoo gudbay oo mid kacusub ayaa taagan. Way idiin caddaatay in rajadiinnii Somaliland oo dal goonni ah ay qummaati u saqiirtay. Waxaa riyadaas idiin kudhow Woqooyi Galbeed iyo Woqooyi Bari oo “Woqooyi” ahaan siyaasadda iskuxulufeysta oo Koonfurta iyo Xamarna u diida in uu dikteetar dambe ugasootaliyo. Waana qaddiyadda uu ina-adeerkaa uugu magacdaray “AWLALISM”.
Idinna waydun ogtihiin oo annana waynu ognahay in aydun ogtihiin xaqiiqada ah in aysan dantiinnu Hartiga iyo Daaroodka kaleba idiin kaga xirnayn e ay idiin kaga xirantahay Majeerteenka oo aydin siyaasadda dalka kula-xulufowdaan. Sidaas oo ay tahayna, waxaa nasiibdarro ah in aysan maqaawiirtii SSDF ee aydun islajaanqaadi lahaydeen oo siyaasadda dalkana toobiyaheeda kuwada toosin lahaydeen Puntland hoggaanka uhayn, balse ay maalaayaacni kale oo jiilka “Nooh” ah safaad xun ku hayaan.
Adiga maxaan kaaga daydaa saaxiib afkaarteenu labada cidhif bay kala joogtaaye.
Mid baan kuu qirayaa laakiin xagga qoraalka aad baad ugu fiican tahay laakiin nuxurku hadalka ayaa kaa maqan.
Qoraalkaagu waa sidii xumbada meesha madhan buuxinaysay laakiin aan cuf iyo miisaan lahayn.
Arrinta MJ baa Isaaq wax baray oo sida loo mucaaradana baray, ma ogtahay in SSDF ay Isaaqu ku jireen. Waxa ka mid ahaa Maxamed Mooge Liibaan, Boobe Yuusuf Ducaale iyo qaar kale.
Ha umalayn in SSDF Majeerteen Keli ah ahayd.
Isaaqu saaxiib Majeerteenka macaamil badani kamuu dhaxayn, wuxuu ka dhaxeeyay Ogaadeenka.
Ogaadeenkuna waa kuwii ” Iidoorka” u bixiyey xilligii barter tradeka iyagoo xoolaha Ogaadeenka loogu doorin jiray alaabta carabta laga keeno ee dekadaha Berbera iyo Saylac ka yimaada.
Xadaarada iyo diintuba inay xeebaha Somaliland ka timi waad ogtahay.
Xagga isagu faanka qabiilka ma aha wax aan dabeecad u leeyahay laakiin mararka qaar inaan wax saxo awgii uun baan qabiil uga hadlaa.
Arrinta Puntland it Somaliland ha midoobeen, mustaqbalka ilaahay baa of laakiin hadda in Soomaaliya iyo Somaliland xuduudeedii dib loogu kala noqdo inta Somaliland la ictiraafayo weeye qorshuhu.
By the way, Waqooyi marka laga hadlayo looma jeedo Jihada Waqooyi, waa magacyo kale oo loo yaqaanay Somaliland. Waqooyi bari Soomaaliya wuxuu well raacsanyahay goboladii koonfureed. Xitaa ninka Boosaaso joogaa hadaad wediiso gobollada Waqooyi wuxuu ku odhanayaa was Somaliland. Markay Somaliland ka hadlayaan reer Puntland magaca Somaliland afka way ka dhawraan, Waqooyi bay yidhaahdaan.
Dadka reer somaliland ayagaa is icriaafsan Ilaahayna waa u gargaaray markii ay dalkooda xoreysaneyeen ee laga xoreeye Daaquudkii iyo Dabahilifyadii Uu xoolaha masaakiinta ku quudin jirey, waxaa meelahaa ciilka iyo cuqdada iyo kalsooni La,aanta ka calaacalayaa waa kuwii Dowlad ku noolka ahaa ee boolida iyo XAARAANTA lagu soo koriyey,
Xaalkoodu waa inay ku dhex dhuuntaan qabiilada kale si ay u noolaadaan been iyo munaafaqadna meelahaa la wareegaan,,
Afweyne kuwii hodey ee uu quudin jirey Ee DULINKA dadka ku dul noolaa way ogyihiin inaanay noolaan karin hadii aanay ka dhex shaqayn Munaafaqad iyo been Labada
Dheri ee Hargeysa iyo Xamar dhexdooda,,
Nasiibwanaag hawiye ka ilbax Ilintii yaxaaska ee la qubi jirey ee beenta ahayd,
Talada koonfur hawiye ayay gacantiisa ku jirtaa waxay noqotana hawiye wuu ogyahay inaanay somaliland marnaba soo noqoneyn,
Hadii hawiye taageero iyo hadii kaleba Somaliland hawsheeeda way wadanaysaa 100 sano oo danbe ha qaadato ninwalboow taa ku biyo cab,
1960 waxa jirey dal somaliland la yidhaahdo
Weligiinba qabiil ku meeraysta Cid wax ka bedeli kartaa ma jirto Yaa munaafaqiin meelihiina ka baroorta idinkoo wada dulaysan oo cuqdadeysan oo kala indho xun ayaa waagu idinku beryi doonaa YAA dowlad ku nool,,
Qofka maanta ku riyoonaya ama aaminasan midnimo danbe ama Soo iyo Sanaag, ama Somaliland dhamaanteed ayaa Zoomalia la midoobi doonta, waa sida kuwii diintu sheegtay, Axsaabul kaaaf,, waa dad hurda, hurdo dheer oo 500 oo sanadood ah ku jirta, waa dad waaqaca jira iyo xaqiiqda ka fog,, markaa qabiilnimo ay qiil ka dhigtaan waxba dhibi mayso sabtoo ah waa dad hurda,, Yaa Axsaabul kaaaf.
Aduunku waxaa uu ku shaqeeyaa
Sharci iyo xeer calami
Ah hadii aad fiiriso
Kenya dhul somali ayay haysataa Ethiopia sidookale
Yaasiiyay waxaa aay kuqaaten
Xaraarka aan soshagay inkasta
Gumayatihii reer Europe aay
Dhibadan ugaysteen walaalaha
Dago waqoyi bari kenya iyo
Somalida Ethiopia hadaba
Kenya waxaa qasab ku ah in aay raacdo xararka calamiga ah, tusaale kurdiyinta 4dal
Bay dagegaan turky, Iraq siriya iyo iraan why because
Xararka calamiga ah ayaa arinkaas sameeyay hadaba
Somali waxaan dhihilahaa
Qasatan kuwaan dagan hargaysa
Isdajiya oo walaahin somali
Ogolaada wixii hada kadanbeeyo dalku waa fadaraal
Dhulkina dhista oo noolaada reer waqooyi, gadabiirsay iyo
Dhulbahante somali bay raban taasna ogaada,,,,
Hartiga degan Sool & Sanaag waxay cashuurta siiyaan Dawlada Somaliland, iyagaa difaaca Somaliland ciidan ahaan, markaa habar majeedheen ah oo naaso waa weyn ku qaraabata magac harti oo waliba aan kastuumo xirnanayn, qayladeeda iyo buuqeedu waxba ma yeeli karto Somaliland, Muuusik ahaan Ayaan u dhagaysana, waan ku raaxaysanaa.. Waxaan ku dhahnaa, naaa dhabayacooy, maanta noo waran.
Majeedheenay haday munaafaqada iyo beenta joojin waydo, dhib ma jidho booowe, Gorowe iyo Qardho ayaa guban doonta lagu kala qixi doonayaa, halkay dun tagi, ma bada ayaudu isku tuuuri,, caqligu ha shaqeeya,, Majeedheenay
Halkee ayaaad tegi doontaan ma bada ayaaad isku tuuuri doontaan.
Saaxiib, waxa aan kahadlayaa waa siyaasadda e ma aha sida loo kala dabqaato; labadu yaanay marna iskaga kaa qaldamin. Ogaadeenka iyo Dhulbahantaha kala-guursi iyo xifaaltan suuganeed oo keliya ayaa iskukiin xira e siyaasad idin kamadhexeyso.
Waqtigan xaadirka ah, Ogaadeenka iyo Majeerteenka ayaa siyaasadda qummaati iskugu xiran oo Daaroodka kalena kun jeer iskagadhow. Haseyeeshee, Isaaqa iyo Ogaadeenku kamadhexeeyo dhul iyo degaan ay siyaasadda Soomaaliya wax kuwadaagi karaan. Haddii xataa ay taasu jiri lahaydna, ogsoonow in ay Ogaadeenku idinka iyo Majeerteenka iskukiin xiri lahaayeen markasta iyo sikastaba.
Isaaqa aan anigu lakaftamo giddigoodu Dhulbahantaha xisaabba kuma darsadaan marka ay siyaasadda noqoto, waayo uma arkaan dad u bisil oo talo lalawadaagi karo habayaraatee.
Anigu iskuma kiin dhedhejinayo xaasha (yaan qalad la iga fahmin), waxaa keliya oo aan cabbirkayga kusaleysanayaa waaqiciga dhabta ah ee jira, kaas oo ah in labada reerood ee maanta Soomaalida ugu ilbaxsan ee siyaasaddana isku lajaanqaadi lahaa oo Soomaalidana (Eebbe Kasokow) sha’nigeeda iyo shimbirkeeda isku dubbaridi kari lahaa ay yihiin Majeerteenka iyo Isaaqa.
Anigu waxaan raadinayaa xalka dhabta ah ee Soomaaliya iyo Soomaaliba ka samata-bixin kara tafaraaeuqa lagu tafiirgoynayo. Sida aad rabtay haddii aad heli waydo, sida aad kafursanwaydo ayaa layeelaa. Miraha daraygana duudduub baa lagu liqaa marka ay siyaasadda noqoto. Khayaalna meel laguma gaaro sikasta oo uu kuugu birbirqayo.
@ Mr. Awlal,
Ogaadeenka aan ka hadlaayo waa ka dega dawlad deegaanka Soomaalida ee kamaan hadlayn ka dega Jubaland iyo Kenya.
Soomaali Maxamed dadka aanu isugu dhaw nahay xagga dhaqanka ee aanu taariikhna wadaagno waa Ogaadeenka DDSI.
Berigii hore mid baanu ahayn laakiin Ingiriiska ayaa na kala gooyey.
Ilaa iyo hadda iyagaan dadka iskaga dhaw nahay. u fiirso xidhiidhka deegaanka iyo Somaliland. U fiirso taariikhda gabayada Soomaalida, had iyo goor waa Ogaadeenka iyo Habaryoonis is dilaya hadana xigto iyo xigaal ah.
Anigu waxaan hubaa hadii Soomaali cidi is raaci karto Ogaadeenka DDSI iyo Isaaqa ayaa is raaci
kari lahaayeen laakiin maba dhacaysee waa mala-awaal.
MJ iyo Ogaadeenka Jubaland ee reer koonfurka ah weeye kuwa xulufada ah.
Arrinta MJ iyo Isaaq miyey isku xulufaystaan si ay Soomaaliya nabad iyo dawladnimo ugu keenaan, waad ogtahay inaanay suuro-gal ahayn inay Somaliland mawqifkeeda gooni goosadka ka tanaasusho. Sidaas awgeed arrintani waa ” Moot Point”… Maantoo dhan waad ka baarandagi kartaa suurtagalnimadeeda laakiin mar hadii aanay dhacahayn oo probability geedu 0 yahay, maxaaba aad fikir ugu khasaarin?
IIDOOR QAWMU LUUDHYADA IYO YAHUUDDA AYAA IDIN AQOONSAN DOONTA HALKAA KA SII WADA
100 SCHOOL ABAARSO FURA.
YUHUUD IYO QAWMU LUUDH AAD AYAY IDIIN AMAANAAN INTEGRATION WANAGSAN AYAAD WADAAN
Soo dhawaaw macaaan
Dadka la salaamaa, cay Laguma bilaabo.
Sharmuuto waaamo, ii waran macaan, maanta maxaa cusub baaaaayo.
Baaaaayo, Mac Mac aan ku siiyay, dhabanka iyo nacaska Ayaan kaa shumiyay.
Waxba sheeko madhalays ah ha la meeraysan waad ogtahay in siyaasiyiintii &isimadii Majeerteen ee caqliga u saaxiibka ahaa markii Puntland la dhisayay 1998 Ku taliyeen in maamul loo dhiso Bari,Nugaal,Mudug,farahana lala gelin dhulka Harti Somaliland iyagoo arkayay xuduudka caalamiga ah iyo dhibta uga iman doonta Puntland,balse askarigii aun taladeeda hayay iyo isimo maangaabnaa Ku taliyeen in la sheegto Sool,Buuhoodle,Sanaag bari.
Xasan Abshir waatuu ka hulleelay Puntland markii la diiday taladiisii,uuna ccaddeeyay inaan PL mahadin doonin go’aankaas,wuxu sheegayona muddo dabadeed lala arki doono.
Maanta PL baxarkaas ayay ku jirtaa,waxbana uma suurtoobayaan hadaanay u noqon taladii qumanayd,waxana ay Ku noqpnaysaa laf dhuun gashay sheegashada dhul waraaqo ugu qoran,gacantana ugu jira dalkii lahaa,hadidayana sii kiritaanka maamulkaas.
Maaha in Somaliland duulaan Ku ahay balse tabasho Mj dhexdiisa ah,tabashadooda manaasibtii lagu shaafin lahaana dad Somalilander ahi Ku fadhiyaan.
Somaliland way gaadhi yoolkeeda,mana jirto sabab aad isugu koolayso maamul Somalia ah oo kamid ahaa Somaliyadii Italy ka xoroobay,xaruntoooduna ahayd,welina tahay XAMAR,dal iyo dadna ka dhexeeyo.
Baaaaayo, Mac Mac aan ku siiyay, dhabanka iyo naaaska Ayaan kaa shumiyay.
Ciidanka qaranka Somaliland marka uu weerarayo Qardho iyo Gorowe kharash badan ku bixi maayo, 500 oo Askari oo Harti ah 200 oo Samaroon ah, taliyuhu waa iidoor, kharash badan ku bixi maayo, amar ciidanka waxaan ku siinaynaa
Hablaha majeedheen ee quruxda badan yaan la taaban, yaan la idinka soo caban.
@@”Man” (Shiine) & Saalax,
“Ogaadeenka aan ka hadlaayo waa ka dega dawlad deegaanka Soomaalida ee kamaan hadlayn ka dega Jubaland iyo Kenya.”
Ogaadeen sow Ogaadeen uun ma aha, maxaad kuhadlaysaa? Ogaadeenku Soomaali oo dhan ayay oodwadaag layihiin e Isaaq keliya ma aha, sidaas aawadeedna waa idiin ku ceeb in aydun Soomaalida kale iska xigsataan.
Haddii aydun (qaaya-ahaan) wax isku darsataanna waxaydun markaas ku khasbanaanaysaan in aydin Soomaalida kale ee DDSI – oo Mareexaan iyo Majeerteen kujiraan – wax lawadaagtaan ee Ogaadeen keligood ma aha. Dhan kasta oo loorogrogo, Majeerteen iyo Daaroodka kale sina uga ma warwareegi gartaan e waydun ku gawracantihiin.
Anigu waxaan wax kucabbiraa oo kuna saleeyaa ‘demographics’ and ‘geography’ oo ah gundhigga dawliil kasta oo dawladnimo dunida dhammaanteed. Idinkuse, khayaalka ay qabyaaladdu iyo shaydhaanku idiin qurxiyeen ee waaqigica ka baxsan ayaydin kadhex qarweysaan.
Isaaqu keli ahaantood qaran ma noqon karaan e, ilaa hadma ayaa sidan lagu jirayaa bay idin latahay?
Something will have to give somewhere, to resolve the Somalia conundrum, and the bullet will have to be bitten at some point in time. So many bitter pills will also have to be taken in the process. That much I am cognisant of fully well, because I exist in reality.
@ Awalal/ Arar/ Paranoid boy,
Wax fahan intaanad wax qorin.
Anigu kumaan odhan cid baanu ku biiraynaa, waxaan ku idhi lacala hadii aanu cid ku biirayno kuwaas baanu xagga dhaqanka iyo Taariikhdaba wadaagnaa.
Iyagaanu marna isdilnaa, marna dad isugu xignaa.
Majeertaanku waa reer koonfureed, taariikh badani nagama dhaxeyso, isku si’na wax uma wada aragno.
Majeerteenka iyo Isaaqu dhawr waxba iskuma fahmi karaan:
* Soomaalidu waxay tidhaahdaa, ” Nin qab weyn iyo nimaan u qabini ma heshiiyaan”
Majeertaanku waa niman kibir badan oo sanka ka hadla, Isaaquna niman kibir iyo ruwaayad loola yimaado ma aha..Afkuu ka laadayaa.
Mj iyo Isaaq waa biyo iyo Saliid oo kale, xitaa Salaanta way isku seegayaan.
On the other hand, Ogaadeenku waa kula dagaalami karaa laakiin waa dadka Soomaalida xagga dhaqanka iyo diinta ugu fiicanoo waxbuu iskula hadhayaa.
Sida Mj ma aha qaar doonaya in ummada ilaahay iyaga kudaba faysho oo ay xukumaan.
Waa nasiib darro in Ogaadeenku badankiisu Soomaali ka maqan yahay to be honest.
Geesinimo, muwaadinimo , diin iyo dhaqanba way leeyihiin.
Majeertaanku waa reer koonfureed, Hawiyaha iyo Raxanweynta ayey is- leeyihiin.
Somaliland iyo Soomaaliya ayuu dadku kala yahay ninyahow. Wax midoobaya oo dambe ma jiraan.
Xitaa hadii Somaliland mustaqbalka ka tanaasusho go’itaanka, wax waliba sidiisii bay ku noqanayaan oo waa Waqooyi oo dhinac ah iyo Koonfur oo dhinac sidii 1960.
Ogow laakiin isaaqu go’aanku gaadho inuu ku dhinto ayaa uga dhaw inuu ka noqdo laakiin ilaahay baa qorshaha ugu dambeeya leh oo og siday wax ku dambayn doonaan
Ogaadeen, hadaad maqasho waa inta iidoorka waso…. kuwa Kenya,ugaalida cuna, ama kuwa Amxaar ku rarto adoonta u noqday kuwaasu ma aha Ogaadeen, waa sheegto.
Ogaadeen, waa in uu iidoorku waso.
AT THE END OF THE DAY, IT’S DEMOGRAPHICS, GEOGRAPHY, AND ECONOMICS THAT DETERMINE THE SHAPE AND FORM OF ANY GIVEN NATION ON EARTH; AND IT’S THESE THAT WILL CARVE UP THE SOMALI NATION TOO. THESE THREE FACTORS TRUMP ANY AND ALL TRIBAL OR CLANNISH WHIMS AND FANTASIES. Isaaqu ikhtiyaarkooda kuma tanaazulayaan e xaqiiqooyinkan kore ayaa khasab kaga yeeli doona in ay waaqiciga dhabta ah aqbalaan.
Muhiimaddu waxay tahay in aanay Isaaqu qaran noqon karin oo dooninna, xuduudo gumeysina aanay abidkood Soomaaliya iyo Soomaalida kudhaqanba soo kala dhexgali doonin. Wixii dawlad goboleed ah ee Woqooyi Galbeed laga hirgelin doono waxaa lagu saleyn doonaa rabitaanka Soomaalida aaggaas wadarta ku ah – Isaaqu waxba kuma laazimi doonaan in ay talada kala sinnaadaan mooyiyee. Runtu taas weeye.
Intaas kale ee aad la burqatay waa iska hawraar fadhi-ku-dirir ee aanan anigu waxba ku darsanin.
Horta hore waad salaamantahay. Bacdal salaam waxaad ogaataa in go’itaanku sahlan yahay hadii uu miiska yaalo wax macquul ah oo uu xaqa iyo cadaalada ku taagan yahay.
Wadanku waa wada beel iyo dagaanadeeda, oo beel kasta wey ogtahay xuduuda ay leedahay oona la wadaagto beesha kale.
Waxaa loo baahan yahay in la qaado afi (referundum) dadweyn oo loo qaado dhulkii uu ingiris gumeysanjirey (Brittish Somaliland)… taasoo daahfuran oo caalamku gacanta ku hayo si loo musuqmaasuqin. Waxaa markaas la ogaan qiyaasta dadka raba in ay go’aan iyo kuwa aan rabin in ay go’aan.
Waxaan aaminsanahay in kaloobar-oo-bar beesha isaaq isku raacsaneyn go’itaanka iskaba daa beelaha kale ee daga sool,sanaag iyo awdal.
Haah oo waa runtaa oo isaaq waa dagaa Sanaag sida Dulbahante u dago togdheer.
Calaa iyo kuli xaal arinkasta waxuu leeyahay hab loo bilaabo. Hadii aakhirikii bilow laga dhigo waxaa dhalan jahawareerka hada socda oo kale. Waa in afi dadweyne la qaado si loo ogaado sida ay tahay xaqiiqada dhabta ah ee gayiga ka jidha.
Marka afida la qaadayo waxaa dadweynaha la weydiin suaalahaan;-
Ma rabtaa in aad ka go’did Italian somaliland. YES/NO
Hadii aad ‘YES’ tiri ma rabtaa in aad kasii go’did brittish somaliland oo aad ku biirtid italian somaliland, ama Djibuti, ama aad noqotid wadan xor ah. YES/NO
Si fiican baad u hadashay saaxiib laakiin reer Somaliland ayey u taala haday hadhow sii kala go’ayaan, horta Soomaaliya halaga Soo dhamaado
Taaasu sharci anigaa kugu raacsan.. Waa danta Somaliland halkay ku jidho.
Aftida waxaa laga qaadayaa dadka degan xuduuda Somaliland, waxa la waydiinyaa, ma Somaliland ayaad rabtaa mise midnimo.. Qabiil aan degin Somaliland Waxba la waydiin maayo.. Tusaale,, Majeedheenay oo Harti ku qaraabata, afti laga qaadi maayo waxba la waydiin maayo.
@ Awlal/ Arar/ Paranoid boy,
You need to realize that the relevant African union’s legislation that deals with border governance clearly states,”… the post colonial borders can not be altered…”
which means that any border dispute resolution is resolved by referring to this act.
This means that legally speaking the union of the two Somalia was null and void since it doesn’t adhere to this act.
As per the act, Somaliland and Somalia’s post colonial borders should not have been altered in the first place.
You do realize that Somaliland, Somalia border is at Yoocada, any land to the South of Yoocada is Somalia which means that Puntland is a region of Somalia and Somaliland is the former British protectorate territory.
Xeerka Afrika ee xuduudaha ayaa sharciyeeynaya xuduudaha Somaliland.
” Lama bedeli karo xuduudihii guumaysigu ka tagay”
Sharcina nagaga adkaan Kari maysaan, xeeladna nagaga adkaan maysaan.
Waxaan kugu raacsahay waa in mugdiga laga saaro dadka degan Somaliland Afti caalumgu goobjoog u yahay laga qaado la waydiiyo dadka Yaa RABA SOMALILAND, Yaa raba midnimo.. Aftida waxaa laga qaadayaa dadka degan Somaliland Harti gaa gaabna ku jiro.
Mugdiga laga saaro, waa la kala go, yaa & la kala go, i maayo. Looma baahna in waxar ku dhimato waa wax si fudud loo xalin karo.
Mid ogaada ciyaaaal, Somaliland haday go, do cirku soo dumi maayo noloshu way soconaysaa, Harti gaag gaab daarood ayaa Madaxweyne ka noqon kara, is dejiya nabada ka shaqeeya.
Anigu doodda waxaa u daayey adiga iyo Ustaad Awlal, waxaase layaab leh inaad weli aammisan tahay inaan isla qof nahay. Matalan, waxaad tusaale usoo qaadatay inaan characterka @ saddex goor adeegsanno! Aqoondarri kuma hayso laakiin indho gorgor malihid.
Doodda Somaliland dhammaanmayso mustaqbalka dhow. Waa inoo wareegga soo socda. إن شاء الله
Qabaailka høre Somaliland in ay rabaan ama diidan yihiin Aftida loogga qaaday dhinaca bariga ama Hartiga, waa Dhuloos & Waroos, waa kuwa degan Somaliland Aftida høre looga qaaday ogalaaday, hadii loo baahdo Afti UN, AU, goobjoog u Somaliland waa u diyaar,, xusid,, Somaliland marnba må ogola 4.5, iyo niiko niiko.
Inta u fahamtay qoraalkayga, in aan necebehay qabiil gaar ah, ama Qabiilka aad u baldhan ee dhabacyaco, saaxiibo badan aan ku leeyay& hablo aad u qurux badan oo aan jeclahay adeeer waxaan idin leeyahy wax barta.
Dhabayacada aan ka hadlayo waa qabiil weyn, asal ahaan waa ugaadhsato, way dhabacdaan waxay degaan Wardheer, Shilaabo, Gaalkacayo.
Waxay ugaadhsadaan Sakaarada, iyo deerada, way dhabacdaan,, waa dhabacyaco.
Dhaqan ayay leeyihiin dhabayacdu ama dhabacu, marka ooon ama haraad qabto kaadida geela ayuu cabayaa, ma aha Majeedheenkankan masaakiinta ah malaayga qudhmay cuna.
AFI Dadweyne waa “double edged sword”. Badanaana cid garan kadha najiidada ma jidho. Arinka go’itaanka waxuu soo jiitamayey wakhti dheer waana loo baahanyahay in dhan loo rido. Sababta afida dadweyn loogu baahan yahay waxay tahay in xaqiiqada ku jidha quluubta dadka dagaanka loo ogaado ayadoo aan la musuqmaasuqahayn ama la hanadin, oo gobol kasta iyo tuulo kasta afideeda dhiibato oo qolo kasta lagu ixtiraamo oo looga dambeeyo waxay door biday.
Marka ingiris iyo talyaani geeska layskaga riixo…. dadku waa wada somali oo british somaliland iyo italian somaliland macna weyn kama sameeynayso beelaha ah dugsi wadaaga. Somali si sahlan ma ukala dhamaanayso hadii aan arinka lagu xalin sida dhabta ah ee somalinimo ee dhulka taala. International lawa iyo african law ma xalin karo arin beeleedka somaliyeed.
Dawladii ugu horeeysay ee somali wada yeelato waxaa dhalatay 1960. Markaas oo ay isku darmadeen labadii waaxood ee dhulka somaaliyeed ee ay kaa haysteen labadii gumeyste ee reer eropa. Labadaas qaybood mid’na calan ma lahayn oo dowlad ma lahayn. Oo labaduba ma ahayn wadan jira oo aqoonsi caalami ah haysta kahor isku darkoodha. Waxay labaduba dhasheen hal maalin oo hal calan yeesheen, oo caalamka kusoo biireen. Dhowr beri ayaa u dhaxeysey markii uu gumeystuhu gacmaha kala baxay. Marka xeerka-africanka ee khuseeya xuduudihii gumeysigu ka tagey maba khuseeyo. Waxuu xeerku khuseyn lahaa hadii labadaas gayi kala lahaan lahaayeen labo dowladood oo calamadoodu ka wada lulanayo kahor isku darsigoodii 1960.
Ayadoo saas tahay ayaa hadana arin beeleedki meesha ku jiraa oo aan loo hagaamsami karin xuduudihii gumeysiga oo hadii khasab wax laysku jacburiyo ay imaan kadho dhibaato aad u weyn oo aan la xalin karin.
Wadan la yiraahdo somaliya oo jab ah… horta hore majiro, sida uusan u jirin wadan la yiraahdo somaliland. Somalia ma ahayn italian somaliland. Somaliland’na ma aha brittish somaliland. Magacyadaasu Waa iska hami mustaqbal. Allaana og waxa dhacaya mustaqbalka.
MAN’noow…. sidee ayey brittish somaliland iyo italian somaliland ukala dhamaanayaan hadii ay brittish somaliland ay horta ayadu kala dhamaan. Dadku waa isku xiran yahay oo dhalku waa isku xiran yahay ee horta afida ha la qabto ayadoo cidkasta xor u tahay in ay dagaankeeda la aado meesha ay rabto. Hadii togdheer doorbido kamid ahaanshaha somali inteeda kale… hadee waxay noqon khasab in lagu xushmeeyo go’aankeeda. Sidaas oo kale ayaa go’aanka sool’na loo xushmeeyn hadii ay go’aansato in ay ka go’do somali inteeda kale. Hadii Awdal go’aansato inayba ku biirto Djibuuti ayana xaq bey u yeelan. Si sahlan ma loo kala bixi karee horta hore madaxa iyo minjaha isku maran hala kala furfuro. Wadada ay marto brittish somalilabd ayey ayana marin italian somaliland. Labada gayiba waxaa ka jira ganuunuc beeleed oo isku mid ah.
Saxiib majeerteen si aad u kala baxdaan ma sahlana.
Ma ogid miyaaa in siwaaqroon dagan yahay Erigabo iyo dagaanadeeda oo ay ka qayb qaadan doonaan afida… waaba hadii la qabto.
Doodda waad kusoo biiri kartaa adiga oo xor ah Ustaad.
Xeerarka xuduudaha ee aad sooxigatay ansax kuma noqonayaan sheegashada Somaliland, sababo dhowr ah aawadood.
1. Waddamada Afrika badankoodu imaatinkii isticmaarka hortii xuduudo saldananeed/ qowmiyadeed ayay kala lahaayeen oo iskuna ictiraafsanaayeen. Kuwii qarannimadooda, dastuurkooda, iyo xadkooda kuheshiiyay markii ay xurriyaddooda guddoonsanayeen weeye kuwa ay xeerarkaasu qabanayaan.
Majirin waddan qaabkaas si rasmi ah ugu dhisnaa ee Somaliland loo aqoonsanaa oo xurriyaddiisa goonni loo guddoonsiiyay. Waxay ahaayeen labo kamid ah geyiyadii mandiqadda Soomaaliyeed ee la kala jarjaray oo inta la isla sugay deeto waddan keliya loo aqoonsaday – waana Soomaaliya.
2. Waxaa jiray dalal taariikhiyan loo aqoonsanyahay “Pre-Colonial States” isticmaarkii xataa sidaas lagu qaddariyay oo aan waxba lagu ijbaarinin, in ay iyagu xuduudahooda iskooda wax uga beddeleen mooyiyee. Waxay u badnaayeen saldanado caan ahaa oo waxaana kamid ahaa saldanadihii Maakhir, Ujuuraan, Cadal, iyo Boqortooyadii Majeerteeniya.
Saldanadihii iyo Boqortooyadii Soomaaliyeed iyagu lama isticmaarsan ee heshiisyo dhiggeed ayaa lala galay. Sidaas ajligeed, Maakhir iyo Majeerteeniya wax xuduudo caalami ah ma saameyn oo iskood iyo ikhtiyaarkood ayay ugu biireen halgankii Soomaalida kale ee gobanimo-doonka. SNM uun baa laga hayaa andacoodka ah Majeerteeniya waa “Koonfur” e juuqraafiga dalka iyo taariikhdaas isticmaarka midna koonfur kama yeelin.
Muhiimaddu waxaa weeye in xuduudihii isticmaarku ahaayeen kuwo “idaari” ah (administrative) e aysan ahayn kuwo muqaddac ahaa oo ay dalal Somaliland iyo Soomaaliya la yiraahdo ka unkameen. Xuduudaha caalamiga ee rasmiga ah ee Soomaaliya waa kuwa Soomaaliya iyo waddamada deriskeeda ah udhexeeya, kuwaasna weeye kuwa ay xeerarkaasu qabanayaan. Dal rasmi ah oo Somaliland loo ictiraafsanaa isticmaarkii hortii iyo bacdigiiba dunida kama jirin.
Xuduudha Afrika waxay ku dhisan yihiin qaabkii gaaladii gumaysta ahayd u samaysay, xuduuda India & China waa qaabka.. USA & Canada, xuduudooda waa xuduuda gumaysi sameeyay,, Habar Majeedheen ah oo talyaanigu gumaysan jiray xuduuda qabiil ma samayn kadho booowe.. Somaliland waa Qaran.
Orod inta tagto jigga iyo Wardheer, dheh xuduuda må jidho dhulkan hade daarood ayaa leh.. Yaaaab
Xuduuduhu, waa sidii gaaladii gumaysta ahayd u samaysay, Waxba lagama bedeli karo.. Xuduuda Somaliland & Zoomalia waa mid cad la wada ogyayahay,, qabiil iyo reer hebel ayaan ahay kuma bedeli karno
In ather words,, Majeedheenay må ah Somalilander, Talayaani ayaa shukaansan jiray, AF Talayaani ayay ku hadashay,, she speaks Italia.. Nooooh
Majeedheenay is Italian, she speaks Italian. Parla italyano. Xuduudii gaalalka gumaysta ayaa ayaa aduunka iyo afrika ka shaqaya oo sharci ah, xuduuda qabiil, International law, ma ogola.
Xuduuda, India China,, gaalkii ingriiska ahaa gumaysta ahaa ayaa sameeyay.. Markaa Qardafuu, hadaad xuduuda cusub qabiil aad samaynaso kuu diidi maayo awoodeeda yeelo, Somaliland waa Qaran.
Waxa aan ka hadlayaa waa Real politik, International law, ma caadifada qabiil.
Dooda, Qardafuu, waxay tahay waa sidaan anigu u fahamy, waxa uu doonayaa in uu sameeyo xuduuu qabiilka daarood gaar u samaysay, waa sheeko caruureed, waa waxa xaafadooda guriga uu kuu ku soo koray looga sheekaysto, ma aha wax lala yimaado shir caalimi ah, ama goob aqoon yahan.
Sideed u qancin kartaa, qof aaminasan Dhagaxbuur, qabri dahar, wajeer, anigaa leh,, wax xuduud ah gaaalo samaysay må jidho? Yaaaab
Waryaa, Qardafuuu, ma adigaa xuduud cusub samayn kara. Internalnationa bønder,, Tukaraq ciidanka Qaranka Somaliland ayaa jooga, orod dagaal ku qaad maradii xumaud buluuga ahayd ka taag.. Dhuuso looma baahna.. Lol
Chill-out saxiib. Tartan laguma jiro ee arin kaa da’ weyn ayaa lays weydaarsanayaa.
Maradii xumaud buluuga ahayd ka taag, geesi noqo… Dhuuso looma baahna.
Maradii xumaud uraysay buluuga ahayd.
Sool & Sanaag, waxaa ka taagan calanka Somaliland, arinka cid wax ka bedeli kadhaa ma jidho.
What i m taking is real politikk nøt imotions,, Qardafuu,, waxa uu ka hadlayaa waa sheeko caruureed waxa uu ka maqal kursiga uu ku soo koray, waxa samaynayaa xudo qabiil daarood,,, Yaaaab, dood wacan
Daaroodka midee, xuduudo cusub aduunka u sameee,, kkkkkkk
Sheeko waali ah ayuu Qardafuu la yimid, ma aha dood ku dhisan aqoon.
Waa muqadas in somali dhigato shirweyne ay uga tashanayso aayaheeda lama huraanka ah.
Labo magaalo ayey dhibaatada somaaliyeed ka jidhaa oo xididadu ugu aasan yihiin. Waana labada magaalo ee xarumaha u ahaa gumeystayaashii reer eropa.
Mid waxaa la yiraahdaa unukaa leh, mida kaleyna war kale kama jiro aan ahayn waanu go’aynaa, oo somali inteedii kale waxay maxbuus u noqdeen labadaas magaalo.
Sidaan laguma sii jiri karo ee tolweynow talo keena.
Saaxiib, doodda ha iska dooxin oo kana taxaddar dabinnada aan aalaaba laga feejignaan marka borobagaanka SNM iyo USC lagu raddinayo.
1. British Somalilandtii asalka ahayd waxay ahayd Saldanaddii Maakhir, taasna lama isticmaarsan e heshiis dhiggeed ayaa lala galay. Markii uu Ingiriisku kacayayna, majirin xuduudo rasmi ah ee Qaramada Midoobay laga ansixiyay oo dal Somaliland loo aqoonsanaa qeexayay; mana jirin caqdi rasmi ah ee ay labadii British Somaliland isku darsameen (Maakjir weligeed goonni ayay u taagnayd).
2. Degaan Dhulbahante leeyahay waxaa isticmaarkaas Britishka kaga jiray oo keliya Soolta Wqooyi. Dhulbahantuhu intooda kale kamid ma ahayn e dhulkooda uun baa lasheegan jiray; waana kuwii jihaadka kulul kula jiray oo aan toos loo gumeysan.
3. Majeerteeniyana boqortooyin madax-bannaan ayay ahaayeen oo Talyaanigu ma gumeysanin. Xuduudo rasmi ah ee uu Talyaanigu uxarriiqayna majirin oo sidaas aawadeeda xuduudihii wixii la oran jiray Italian Somaliland shuqulba iskuma ay lahayn.
5. Saddexdaasna waxaa hadda la isku yiraahdaa Puntland, waana hadal lagu qoslo in lagu andacoodo waa Italian Somaliland iyo Koonfur. Ma aha oo weligoodna ma ahayn – isticmaar ahaan iyo juuqraafi ahaan midna.
Puntland, wax kale ma aha,, waa ku dayo Somaliland,, shaqadii ku dayashada may samayn. Bint girl, waxaan u shagay May qaban, Xaarmaajo ayaa lacag u soo diray Boosaaso aya gubtay,, very sad.
Binti girl, Xaarmaajo ayaaa lacag yar kuu soo diray Boosaaso ayaa Gubtay,, Very sad.
Somaliland waxaa leh qabiilo la garanayo, Madhibaan ku jiro, Majeedheenay la, aantikit hahady baska soo raacdo sharciga ayaa qabanaya.
Majeedheenay, tikit la, aan Somaliland buss sooma raaci karto sharciga ayaa qabanaya.
Majeedheenay,, talo aan ku siiyo, Hawiye beeeenta u sheeg. Iidoor Run u sheeg.
Saxib runta ayaa wax lagu abaara meesheydoonto hakaala dhecdee hadii kale sheko khiyaaliga ayaa dib kuugusoo noqon oo adiga ku marin habaabinaysa.
Nimankaanu geed dheer iyo mid gaaban way u fuuleen goitaan walina diyaar ayey u yihiin in ay sii fuulaan geedo kuwaas kasii badan. Uma jeedo masuuliyiin ama madax la jaanqaadaysa oo geedkay fuulaanba la fuulaysa. Khaasatan puntland oo arinkaanu aad iyo aada u khuseeyo maba isku mashquuliso oo masuul iyo muwadinba waxayba u haystaan waxaanba dhici karin oo meelna meysan dhigan “plan B” lacala hadii ay dhicisoowdo “plan A” ee ah raadinta somaliweyn… oo ay dhacdo kala goynta wadanka.
Run ahaantii anigu waxaan u arkaa raadinta somaliweyn…. soo nooleynta iyo barbaarinta iyo dowlad u dhiska irir samaale oo Daarood la hayste ka noqonayo barito.
Irir samaale oo dhan raali ayey ka yihiin goitaanka waayo waxaa ugasoo baxaya labo dowladood oo ay ayagu ka taliyaan oo si sharciyeesan inta kale ku gumeystaan. Saxiib international law waxaa lagu fuliyaa danaha khaska ah ee dowladaha muruqa ku leh dunida oo cidii ay ku socon kadho iyo meeshii ay dantoodu ku jidho ayey ku socodsiiyaan.
Hadii ay puntland dunida u cadeyso in ay go’ayso hadii qayb ka mid ah somalia go’do…. dunidoo dhan gacmaha ayey ka laaban xuduudaha somalia.
Cida heerkaas soo gaarsiisey arinka gooni goosadka ah waa puntland oo shaqadeedi ka seexatay oo isku mashquulisey riyo ah qaraw maalmeed … ee ah raadinta somaliweyn, oo ayada maahee cid kale’ba doonahayn, oo ah dabin ay ayadu gacmaheeda ku falkatay oo bari ku dhici doonto.
Saxiib…. runtu beenta wey aamusisaa.
Kan beenta sheegaya iyo kan loo sheegayo’ba wey wada aamusaan markii run timaado.
Binti girl,,, iidoorku ma jecla dhuusada Daaroodka ee aad u qarmuun, beenta ku dhisan.
Somaliland haadaad diido, dhib ma laha baayo, Qardho iyo Gorowe Ayaan gubayanaa, qax iyo biliqo diyaar u noqo, Baaaaayo